Save Our Shops - Myanmar - Mote Poh
သင်နှစ်သက်တဲ့ ဆိုင်တွေရဲ့ကူပွန်ဘောင်ချာတွေကို ကြိုတင်ဝယ်ယူထားပြီး COVID-19 ကာလအလွန် သင်နှစ်သက်တဲ့ ဆိုင်တွေ ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Discount တွေ ရယူလိုက်ပါ
COVID-19 ကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်များနဲ့ တကွ အခြားဆိုင်များစွာ ခဏတာ ပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။
COVID-19 ကာလအတွင်း ဆိုင်များနှင့် Customer များ ဆက်ဆံရေး ဆက်လက် နွေးထွေးမှုရှိနေစေရန် သာမက ဆိုင်များပိတ်ထားစဉ်အတွင်း နှင့် COVID-19 အလွန် ဆိုင်များပြန်ဖွင့်ချိန်တွင် အသက်တမျှအရေးပါသော လုပ်ငန်းဝင်ငွေရရှိ‌စေရန် မုန့်ဖိုးမှ "Save Our Shops" ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို စတင်လိုက်ပါပြီ။
ပြည်တွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်များနဲ့ တကွ အခြားဆိုင်များ COVID-19 ကာလအလွန်တွင် လိုအပ်လာမည့် ပြန်လည်မတည်ငွေ အခက်အခဲများကို သင့် ကူပွန်ဘောင်ချာ ဝယ်ယူမှုများက ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပါ။ ယခုကဲ့သို့ အကူအညီများ မရပါက ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် မတည်ငွေမရှိသော အချို့သောဆိုင်များမှာ COVID-19 ကာလအလွန်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် အခက်အခဲများကြုံတွေ့နိုင်ပြီး တချို့မှာ ပြန်ဖွင့်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
"Save Our Shops" အစီအစဉ်ဖြင့် ပြည်တွင်းရှိစားသောက်ဆိုင်များ နှင့် အခြားဆိုင်များစွာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ သာမကဘဲ ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ၊ ဆက်နွယ်နေသော အခြားလုပ်ငန်းများကိုပါ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး လည်ပတ်မှုကို တစ်တပ်တစ်အား ကူညီပေးသွားနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းပါတယ်။
Save Our Shop အစီအစဉ် ကို မုန့်ဖိုးမှ ပြုလုပ်ပြီး Public Relation မိတ်ဖက်အဖြစ် ERA မှ ကူညီထောက်ပံ့ ပေးထားပါတယ်။
၂၀% - ၂၅% လျော့ဈေးနဲ့ ကူပွန်ဘောင်ချာများ ကြိုတင်ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
အောက်ပါဆိုင်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို facebook.com/saveourshopsmm သို့လဲ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
Checkout တွင် Credit Card ဖြင့် ပေးချေနိုင်သလို or mobile money ဖြင့်ပေးချေရန် www.motepoh.com/pay သို့ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Scan the QR Code or Send to 099 6030 2909.
ကူပွန်ဘောင်ချာများ အခုကြိုတင်ဝယ်ယူထားပြီး COVID-19 ပြီးတဲ့အချိန်မှာ လျော့ဈေးတွေ ရယူလိုက်ပါ။
အပေါ်မှ Link တွင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး www.facebook.com/saveourshopsmm page တွင်လဲ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ကူပွန်ဘောင်ချာများကို အီးမေလ်းဖြင့် ရယူလိုက်ပါ
ဆိုင်များ ပြန်ဖွင့်သောအခါ သင့်ကူပွန်ဘောင်ချာများကို အီးမေလ်းသို့ Electronic ကူပွန်ဘောင်ချာအနေနဲ့ ပို့ပေးမှာပါ
ဆိုင်များသို့သွားရောက်ပြီး သင့်ကူပွန်ဘောင်ချာများကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာကျပ် ၁၀,၀၀၀ တန်ဖိုးကို မြန်မာကျပ် ၈,၀၀၀ ဖြင့်ဝယ်ယူပြီး မြန်မာကျပ် ၁၀,၀၀၀ တန်ဖိုးအထိ သုံးနိုင်မှာဖြစ်လို့ ၂၀% လျော့ဈေးရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
hello@motepoh.com သို့လဲ email ပို့လို့ရပါတယ်။
ဆိုင်တွေ ပြန်မဖွင့်တော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
မုန့်ဖိုးကနေ သင်ဝယ်ယူထားတဲ့ ကူပွန်ဘောင်ချာများအားလုံးအတွက် refund ပြန်ပေးမှာပါ။
သင့်ပိုက်ဆံ ဆုံးရှုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကူပွန်တွေကို ဘယ်ချိန်အထိ သုံးလို့ရမလဲ?
သင်နှစ်သက်တဲ့ ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ပြီး ၃ လကြာအထိ သုံးလို့ရပါတယ်။ သင့်ကို email ပို့ပြီး အသိပေးမှာပါ။
ဘာလို့ ကူပွန်ဘောင်ချာတွေကို ဝယ်ယူသင့်တာလဲ?
သင်နှစ်သက်တဲ့ ဆိုင်တွေ ပိတ်ထားပြီး ပြန်ဖွင့်ဖို့ ငွေကြေးလို အပ်မှုတွေရှိမှာပါ။ သင့်ကြိုတင် ဝယ်ယူမှုများက သင်နှစ်သက်တဲ့ဆိုင်တွေ ပြန်လည် လည်ပတ်လာဖို့သာမကပဲ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တကွ စီးပွားရေး လည်ပတ်မှုတစ်ခုလုံးကိုပါ ကူညီနိုင်မှာပါ။
မုန့်ဖိုးက ဒီအစီအစဉ်ကို ဘာလို့လုပ်တာလဲ?
မုန့်ဖိုးဟာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း မြို့ ၁၅မြို့မှာ ရှိတဲ့ ဆိုင်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော်နှင့် မိတ်ဖက် အဖြစ် အလုပ်အတူတူလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မုန့်ဖိုးအနေနဲ့ မိတ်ဖက်ဆိုင်တွေကို ယခုလို အခက်အခဲ ကာလအတွင်း ကူညီ ပေးလိုခြင်းကြောင့် Save Our Shops အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင်ဝယ်ယူထားသော ကူပွန်ဘောင်ချာတွေကို ဆိုင်များ ပြန်ဖွင့်မှ သုံးလို့မှာပါ။
စားသောက်ဆိုင်တွေအတွက်တော့ ကူပွန်ဘောင်ချာတွေကို ဆိုင်တွင်းစားသောက်ခွင့်ဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန် သုံးလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်တွင်းသာ စားသုံးခွင့်၊ တစ်ကြိမ်လျင် ကူပွန်တစ်ခုသာ အသုံးပြုခွင့်၊ ကူပွန်ဘောင်ချာတန်ဖိုးထက် နည်းသော Bill များအတွက် အသုံးပြုခွင့်မရနိုင်ခြင်း၊ အခြား လျော့ဈေး ပရိုမိုရှင်းများနှင့် တွဲဖက်ခံစားနိုင်ခွင့်မရှိခြင်း ဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းသော စည်းကမ်းချက်များသာရှိပါတယ်။
သူငယ်ချင်းအတွက် ကြိုတင်ကူပွန် ဘောင်ချာတွေကို လက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ပေးလို့ရမလား?
ရပါတယ်။ သင်ဝယ်ယူပြီးတဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ကို hello@motepoh.com သို့ mail လေးသာ ပို့ပေးလိုက်ပါ။ သင့်သူငယ်ချင်း ကို ကြိုတင်ကူပွန် ဘောင်ချာ ပို့ပေးမှာပါ။
သင်နှစ်သက်တဲ့ဆိုင်တွေကို အစီအစဉ်ထဲ ထည့်ပေးနိုင်လား?
ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်! hello@motepoh.com သို့ www.facebook.com/saveourshopsmm page တွင် ထည့်သွင်းပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဖက် များကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
Public Relations မိတ်ဖက်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ communications agency တစ်ခု
ERA Myanmar ဟာ သူတို့ရဲ့ Client များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရာ၊ Campaign များ ပြုလုပ်ရာနဲ့ လေ့ကျင့်မှုပေးရာတို့မှာ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီများ များနဲ့ ဂုဏ်ယူစွာ ရင်ဘောင်တန်း ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။ ERA ရဲ့ ၂၀ မကတဲ့ Campaign ဆုများနဲ့ ၅ ခု မကတဲ့ Agency ဆုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံက Agency တွေထဲမှာ အများဆုံးဖြစ်ပြီး ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးကို မှတ်ကျောက် တင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဆိုင်များ COVID-19 ကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါ။